China Wholesale Zipper musoro Vatengesi, Vagadziri - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Kumba > Zipper musoro
Kwete. 5 Nylon plastiki zipper puller
Iyi 5 nylon plastiki isina-kukiya zipi dhonza inogadzirwa nePOM. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapasa bvunzo yeSGS uye ndokuisa mumusika mushure mekupasa bvunzo.
5 Vislon Plastic zipi puller
Iyi 5 Vislon Plastic zipper puller inogadzirwa nePOM. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye ikaiswa pamusika mushure mekupasa bvunzo. Zvigadzirwa zvakakwana zvinounzwa.
3 Vislon Plastic zipi puller
Iyi 3 Vislon Plastic zipper puller inogadzirwa nePOM. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Hunhu manejimendi sisitimu, inoramba ichivandudzika dzakasiyana siyana Hardware uye software zvivakwa, uye edza kutora pamusika nemhando.
3 Nylon epurasitiki zipi musoro
Iyi 3 nylon plastiki zipper puller inogadzirwa nePOM. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapfuura SGS uye zvakapfuura kuongororwa uye ndokuisa pamusika.
5 Nylon isingaoneki inotsvedza
Iyi 5nylon isingaoneki inotsvedza inogadzirwa neEuropean neAmerican zinc alloy. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvave SGS yakaedzwa uye ikaiswa pamusika mushure mekupasa bvunzo.
4.5 Nylon isingaoneki inotsvedza
Iyi 4.5 nylon isingaonekwi inotsvedza inogadzirwa neEuropean uye American zinc alloy. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Iyo ine akawanda patent. Zvese zvigadzirwa zvakapfuura SGS. Mushure mekupasa bvunzo, musika uchawedzerwa uye mhando yechigadzirwa chic......